Hive Platform အရှိန်ယူနေပြီလော ( Henry Aung ) — HiveHustlers
Hive Platform အရှိန်ယူနေပြီလော ( Henry Aung )
မင်္ဂလာပါ။ ဒီနေ့ကတော့ ကျွန်တော် မလေးရှား သွားသည့် အကြောင်း ခဏနားကြပါအုံးစို့။ မနား၍လည်း မဖြစ်တော့ပါ။ Blog တခုလုံးလည်း ကြာလျင် စီးကရက် နံ့ ၊ အရက်နံ့ ထောင်းထောင်းထကာ ဒုစရိုက်နံ့ များထွက်လာနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုတော့ ခရီးသွားသည့် အကြောင်းတော့ နောက်များမှ ဆက်ကြပါစို့။ ယခုတော့ ရိုးရာ မပျက် Hive Platform ဘက်လှည့်ကြပါအုံးစို့။
Hive အနေဖြင့် ယနေ့ နံနက်ကတော့ 1$ အထက်သို့ နောက်တကြိမ် ထပ်တက်သွားပါသည်။ လွန်ခဲ့သော သုံးလခန့် မှစပြီး Hive သည် ဈေးကွက်ပြောင်းလည်းလာခဲ့သည် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုမတိုင်ခင်ကတော့ Hive သည် ပြား ၅၀ အောက် ဝန်းကျင်တွင်သာ ကျင်လည် နေခဲ့ရာမှာ လွန်ခဲ့သော စက်တင်ဘာလတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် Hive ဈေး USD $1 အထက်သို့ တက်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်က Hive ဈေး ၂၄ နာရီ ဝယ်ရောင်း အင်အား ဒေါ်လာ ၇၈၄.၄၆ သန်း ရှိခဲ့ပါသည်။
ထိုမှ တဆင့် တဖြည်းဖြည်း ပြန်လည် ဈေးကျသွားရာ စက်တင်ဘာလ ကုန်ကာနီးတွင် သူ၏ မူလဈေး ပြား ၅၀ နီးပါးသို့ ပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အောက်တိုဘာ လဆန်းပိုင်းတွင် သူ၏ အမြင့်ဆုံးဈေးဖြစ်သော USD $1.3 သို့ ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည် ခုန်တက်သွားခဲ့ပါသည်။
ဤ ဒုတိယတကြိမ်တွင်တော့ ၂၄ နာရီ ဝယ်ရောင်း အင်အား ဒေါ်လာ ၁.၆ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် အောက်တိုဘာ လကုန်ကာနီးတွင် ပြား ၇၀ ဝန်းကျင်တွင် တင်ကျန်နေခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် နိုဝင်ဘာ လဆန်းတွင် Hive ဈေးသည် နောက်တကြိမ် USD $1 သို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါသည်။ ဤ တကြိမ်တွင်တော့ ၂၄ နာရီ ဝယ်ရောင်းအင်အား ဒေါ်လာ ၅၇၀.၁၁ သန်းသာ ရှိခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက်တော့ Hive သည် ပြား ၇၀ ကျော် ၈၀ ဝန်းကျင်တွင် ကျင်လည် နေခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ယနေ့ နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့တွင် Hive အနေဖြင့် စတုတ္ထ အကြိမ် USD $1 သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြန်ကာ လောလော ဆယ် အခြေအနေထိ ၂၄ နာရီ ဝယ်ရောင်းအင်အား ဒေါ်လာ သန်း ၁၅၀ အထက်တွင် ရှိနေပါသည်။
အထက်ပါ အကြောင်း အရာများအား ဆင်ခြင်ကြည့်လျင် Hive သည် HBD အား Saving တွင် Lock ချပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဈေးကွက် ဆွဲတင်ရာ၌ ယခင်ကကဲ့သို့ မူလ အနိမ့်ဆုံး ဈေးသို့ ပြန်မကျတော့ပဲ ဈေးကွက်တခုထိ ဆွဲတင်ထားနိုင်သည်ကို တွေ့နေရပါသည်။
Hive သည် ဈေးကွက် အတက်ဘက်သို့ ဦးတည်ရန် သွေးတိုးစမ်းနေသည်ကတော့ သေချာပါသည်။ အခြားတဖက်တွင်လည်း Hive များက Hive Engine ဈေးကွက်ရှိ Project များသို့ စီးဝင်နေကြပြီ ဖြစ်ရာ ဈေးကွက်သို့ တွန်းပို့မည့် Hive များသည် နည်းသထက် နည်း၍ လာပြီ ဖြစ်ပါသည်။
မိတ်ဆွေတို့ သိပြီး ဖြစ်သည့် အတိုင်း Hive Engine ရှိ Project များကလည်း မိမိတို့ Token အကြောင်း project အကြောင်း post ရေးတင်သူများအား ထိုက်ထိုက်တန်တန် Vote ပေးနိုင်ရန် power စုနေကြသည် ဖြစ်ရာ Hive သည် လာမည့် နှစ်များတွင် အတက်ဈေးသို့သာ ရှိလိမ့်မည်ဟုထင်ပါသည်။
Hive အား တွန်းတင်နိုင်သော အခြားတွန်းအား တခုမှာ Hive Gaming ဖြစ်ပါသည်။ ETH အခြေခံ Blockchain game တို့မှာ transition fee ကြောက်စရာ ကောင်းလာသည်နှင့် အမျှ Blockchain game တို့သည် Transition free ဖြစ်သော Hive Blockchain သို့ မျက်စိကျလာကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ Hive platform သည် Blockchain ပြေးလမ်းပေါ်တို့ ရောက်နေပြီ ဖြစ်ရကာ မကြာမှီ အချိန်တွင် Hive ဈေးသည် USD $1 နှင့် အထက် ဟူသော ဈေးဖြင့် ပြေးနေလိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းမိပါသည်။
15/11/2021- Monday - 18;07 Pm
#myanmar #hive #proofofbrain #archon #neoxian #creativecoin #aeneas #hivelist #hivehustlers
ဈေးကတော့ ထိန်းထားလို့ရမယ်မထင်ဘူး.... တဖြည်းဖြည်း နဲ့ တအိအိ တက်သွားတာက ကောင်းပါတယ်။ !PIZZA !LOLZ
ပျော်စရာအချိန်လေးတွေဆီသို့ ဦးတည်နေသော Hive coin လေးပဲပေါ့ ။လာမည့်နှစ် အစလောက်မှာပဲ 1$ ကျော်မည်ထင်ပါ့...!PIZZA
အစ်ကိုလည်း အဲသလိုပဲ ထင်ထားတယ်... ရုတ်တရက် ခုန်တက်တာထက် တအိအိ တက်တာကို သဘောကျတယ်။ !PIZZA. !LOLZ
ansoe2months ago (edited)
တက်ပါစေ တက်ပါစေ တက်ပါစေ 😀
တက်ပြီး ပြန်မကျဖို့ အရေးကြီးတယ်....😀😀😀 !PIZZA. !LOLZ
2022 မှာ $2 ဖြစ်မှာဆိုတာ သေချာနေလောက်ပ။
နှစ်ကုန်မှာ ဒေါ်လာ တစ်ဆယ်လောက်ဖြစ်သွားမလား 😁😆
နှစ်ကုန်မှာ ဆယ်ဒေါ်လာ တော်ပြီလား... နည်းနေသေးလားလို့ 😀😀😀😀 !PIZZA. !LOLZ
မင်္ဂလာ ရှိသော သတင်း
တကယ်ကို မင်္ဂလာရှိတဲ့ သတင်းပါလို့။ !PIZZA. !LOLZ
High with HIVE ပဲ
Up to the Moon…!PIZZA. !LOLZ
@kachinhenry(7/20) tipped @ecency (x1)
thanks you !PIZZA. !LOLZ